China Ss304 ကိုက် Ball Valve နို့သီးခေါင်းသောက်သူထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | နား
ကျွဲနွား Hutch အိမ်သွန်း
Farrowing သေတ္တာ Slat ကြမ်းပြင်
ဝက် Farrowing သေတ္တာ
Piglet အပူ Incubator
ဖန်မျှင်ထည် Slat ကြမ်းပြင် Beam ကို
ဝက် Anti-Slip ရော်ဘာ Mat
ဝက် Sorting ဘုတ်အဖွဲ့ Panel ကို
Tpu မွေးမြူရေးနား Tag
ရေအဆင့်ကို controller ကို
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 311 85291950
ပလပ်စတစ် Piglet အပူ Box ကိုတင်နေတာ
Farrowing သေတ္တာတပ်ဆင်ပြီး Incubator
ဝက်သိုးနွားအတွက်နား Tag Pliers
Ss304 Ball Valve နို့သီးခေါင်းကိုသောက်ပါ
ဝက်သောက်ချင်သောအခါက mandrill ကိုတွန်းပေးသည်။ ရေသည် shell, mandrill နှင့် steel ball တို့၏ကွာဟချက်ကိုဖြတ်သွားသည်။ ဝက်တွန်းအားပေးခြင်းရပ်တန့်သွားသောအခါရေဖိအားနှင့်သံမဏိဘောလုံးနှင့် mandrill တို့၏အလေးချိန်တို့သည်၎င်းတို့အားခိုင်မြဲသောဆက်နွယ်မှုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ရေသည်ချက်ချင်းစီးဆင်းသွားလိမ့်မည်။
ဝက်သောက်ချင်သောအခါသူတို့ကသောက်သူကိုသူ၏ပါးစပ်တွင်ကိုင်။ အဆို့ရှင်ပလပ်နှင့်တံဆိပ်ခတ်နေသောကြားကရေကိုဖြတ်သန်းသွားစေရန်အဆို့ရှင်ကိုကိုက်သည်။ ဝက်သည်ကိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါပြန်လာသည့်နွေ ဦး ပေါက်သည်အဆို့ရှင်ကိုပြန်ဆွဲယူပြီးရေစီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ရန်ကွာဟမှုကိုထပ်မံတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသောက်သုံးသူများသည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးရေစီးဆင်းမှုနှေးသည်၊ ဝက်သောက်ရန်အတွက်အဆင်ပြေသည်။
ဝက်ဘဲ - ငွေကောက်ခံရေသောက်
၁။ ဝက်နို့သီးသောက်သူများ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအခွံ၊ mandrill နှင့်သံမဏိဘောလုံးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
2. တပ်ဆင်မှု၏ထောင့်သည်45º-75ºဖြစ်ပြီးဝက်များအတွက်မြေမျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းမှုသည် ၂၅ မှ ၃၀ စင်တီမီတာ၊ ဝက်ကြီးထွားရန် (၃-၆ လအရွယ်) မှ ၅၀-၆၀ စင်တီမီတာ၊ အရွယ်ရောက်ဝက်များအတွက် ၇၅-၈၅ စင်တီမီတာရှိသည်။
dia Thread ။
ဘဲ - ဘီလ်
G1 / 2″
1.Pig သောက်ရေ nipple သောက်စတီးခန္ဓာကိုယ်, အဆို့ရှင်ပင်စည်, filter ကိုပါဝင်သည်။
2.Pig သောက်ရေ nipple သောက်သူသည်ဝက်များအတွက်သန့်ရှင်း။ သန့်ရှင်းသောရေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
၃။ ထိရောက်သော၊ အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်နှင့်ရေကိုသက်သာစေသည်။
4. အရည်အသွေးမြင့်ပြီးကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
5.Pig သောက်သုံးရေ nipple သောက်သုံးနိုင်သောချိန်ညှိနိုင်သောပလတ်စတစ်စစ်သည်ရေမှအညစ်အကြေးများကိုကာကွယ်ပေးပြီးမြင့်မားသောဖိအားရေနှင့်ဖိအားနည်းစနစ်များကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသည်။
ဝက် Ball ကိုနို့သီးခေါင်းသောက်
ဝက်ဘဲ - ငွေတောင်းခံရေသောက်
ဝက် Straw အမျိုးအစားနို့သီးခေါင်းသောက်
လိပ္စာ: C306, Jinshi စက်မှုအဆောက်အအုံ၊ အမှတ် ၃၆၈ Xinshi မြောက်လမ်း၊ Shijiazhuang City, Hebei, China
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2019 HEBEI MARSHINE COMPANY: မူပိုင်ခွင့်များကာကွယ်ထားသည်။